Windows 10 ebighị Key – Official Activator
Ozi ọma si Morehacks otu! Anyị maara na ị chọrọ ịgba ọsọ ọhụrụ Windows 10 on your PC ma ị na-achọghị ịzụ a akwụkwọ ikike. Now we offer you a Windows 10 ebighị Key! Nke a kwere omume ekele a software kere site a ìgwè ndị ọkachamara programmers. They created a Windows 10 Activator, nke site na igodo maka Windows 10 mfe. Anyị na-ekwe nkwa na ndị niile na ikikere eme bụ 100% -arụ ọrụ. Ị ga-agba ọsọ a kpam kpam Ezigbo Windows 10.
Ọ bụrụ na ị nwere Windows 7/8/8.1 on your PC ị nwere ike imelite gị usoro na Windows 10, ma ị gaghị enwe ike ịnụ ụtọ nile ọ si atụmatụ dị ka: mmelite, windows 10 media center, Microsoft Office 10 na a otutu ihe. Ị ga-amanye ịzụta a ikike ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji Windows 10 na mgbe ya zuru ike. ugbu a, na a Windows 10 Ebighị Key Generator i nwere ike rụọ ọrụ Windows 10 mfe! Anyị ule ngwá ọrụ a na ọ rụrụ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru okè. N'okpuru ebe ị pụrụ ịhụ otú iji rụọ ọrụ Windows 10:
1. Download Windows 10 Product Key Ngwá Ọrụ
2. Open Settings, na pịa / tap na Windows na-adịghị arụ ọrụ. Activate Windows now.
3. Pịa / tap na Tinye isi button. Ọ ga-emeghe windo n'okpuru
4. Open the Windows 10 Product Key Ngwá Ọrụ na idetuo na CD-Key eme
5. Ọ bụrụ na ị depụtaghachiri 24 digits koodu n'ụzọ ziri ezi, na window n'okpuru kwesịrị egosi
6. Pịa na ”Osote” button na-eche a ole na ole oge. Ọ bụrụ na ihe niile si ok, na window si n'okpuru kwesịrị egosi
7. Now close the window and enjoy Windows 10 ezi
Ya mere,, ihe ị na-eche? Download now the Windows 10 Ebighị Key Ngwá Ọrụ na-enwe Windows 10!